दैनिक उपभोग्य सामग्रीका पसल खुले तर ग्राहक भने आएनन ! - Aarthiknews
दैनिक उपभोग्य सामग्रीका पसल खुले तर ग्राहक भने आएनन !
काठमाडौं । सरकारले देशमा लकडाउन गरे पनि दैनिक उपभोग्य सामग्री बिक्री वितरण गर्न पसल खुल्ला राख्न भनेको छ तर व्यापारीले भने ग्राहक नभएको भन्दै खुला राखेका छैनन् । सरकारी मातहतमा रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले समेत आफ्नो बिक्री केन्द्र बिहीबार २ बजे नै बन्द गर्‍यो ।
कर्पोरेसनका प्रवक्ता ब्रजेश झाले पसलमा ग्राहक नै नआएपछि दिनभरि खोल्नुको अर्थ नरहेको बताए । सडकमा मान्छे हिँड्न नदिने अनि पसल खोलेर मात्रै के गर्नेरु यस विषयमा स्पष्ट नभएसम्म पसल मात्रै खोलेर अर्थ नहुने उनको भनाइ छ । शुक्रबार बिक्री केन्द्र के कसरी खोल्नेबारे निश्चित भएको छैन, उहाँले थप्नुभयो, यस विषयमा सरकारबाट कुनै निर्देशन आउला अनि त्यही अनुसार अगाडि बढ्छौँ ।